मोफसलकी कान्छी फेसन डिजाईनरका कथा 'कुमुदा' - HarekKhabar.com
मोफसलकी कान्छी फेसन डिजाईनरका कथा ‘कुमुदा’
२८ श्रावण २०७७, बुधबार
सदिक्षा गौतम (२२), चितवनकी आषा लाग्दी फेशन डिजाईनर हुन् । उनलाई उनका अभिभावकले ल्याब टेक्निसियन पढाए तर उनको मन फेशन र डिजाईन संगै अडिएको थियो । उनको अथक प्रयास पछि उनले आफ्नो पढाई बिचमै छोडिन् र लागिन् काठमाण्डौ स्थित मोडेल कलेजमा फेशन डिजाईनको कोर्ष गर्न । अध्ययन पश्चात केहि गार्मेन्ट्स कम्पनिले उनलाई कामको लागि प्रस्ताव पनि गरे । अर्को तर्फ बलिउडमा संघर्ष गरिरहेकी आफ्नी दिदी संगै गएर उतै काम गर्ने उनको लागि दुईवटा बाटा थिए तर उनले तेश्रो बाटो रोजिन् र नारायणगढमै सुरुवात गरिन् कुमुदा बुटीक । आज हामिले सदिक्षा गौतम संग कुराकानि गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
यहालाई स्वागत छ ।
धन्यवाद, सर ।
फेसन डिजाईनको भविस्य कस्तो छ ?
नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने हामि बिस्तारै बिस्तारै अगाडी बढ्दै छौं । विश्व बजारमा यसको राम्रो पहिचान र ख्याती छ तर नेपालमा भने मोडलिंग, चलचित्र र अन्य रंग क्षेत्रमा यसले आफ्नो स्थान जमाउदै छ । आम युवा जमातमा फेसन प्रतिको लगाव बढ्दो छ। बिस्तारै फेसनेवल हुने र डिजाईन गरिएका कस्टुमस्, ड्रेसको रोजाई तर्फ उन्मुख हुदै छन् । बिशेष राजधानी केन्द्रीत बजार भएता पनि यसको भविस्य भने सुन्दर मान्न सकिन्छ ।
अहिले त कोरोनाको माहामारी छ नी, यसले कस्तो असर पार्दैछ?
अब यसको असर बिश्वभर र हरेक ब्यवसायमा परेको छ । फेसनको दुनियामा पनि पक्कै यसको असर छ नै तर हामि पुन उदाउने छौं, बिस्वास छ । सुरक्षीत भएर यस्तो बेलामा मैले नया नया डिजाईनहरु स्केच गर्ने र तयार पार्ने काम गरिरहेको छु । घरबाटै अर्डर गर्नेहरुलाई तिज र दसै तिहार लक्षित गरेर महिलाहरुको आकर्षक पहिरनहरु पनि उपलब्ध गराउने प्रयासमा छु । यसको लागि अनलाईन प्रोमोसन, मोडलहरुको फोटो सुट आदी काम भैरहेका छन् ।
तिज आउदै छ, यसपालीको तिज पहिलेको जस्तो उल्लास त नहोला, ब्यापार होला त?
पक्कै कम त हुन्छ नी, तर घरमै बसेर तिज लगायतका चाढ पर्व मनाउनेको भने कमि छैन, अर्डरहरु आईरहेका छन् । कुमुदाले चितवनका महिला दिदि बहिनीहरुलाई पक्कै अलिकती भएपनि खुसी बनाउने नै छ ।
यति सानो उमेरमा फेसन डिजाईनर बन्नु भएको छ, पत्याउछन्?
पत्याईराखेका छन्, काठमाण्डौमा पनि केहि समय अघि मैले आफ्नो डिजाईनको सो मा भाग लिएको थिएं । यहा पनि राम्रो प्रतिकृया आईरहेको छ । मेरो दिदि बहिनी र आमाले पनि साथ दिनु भएको छ । म कुमुदा बुटिकको राम्रो बातावरण भैसके पछी नेपाली चलचित्र तथा अन्य ग्ल्यामर क्षेत्रमा राम्रो पहिचान हुने गरि फेसन डिजाईनर बन्ने छु र नेपालीपनले भरिएको फेसन सो समेत गराउने योजनामा छु । गर्दै जाँदा खारिने छु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
म सबैलाई कोरोनाको त्रास बाट जोगिऔं, घरमै बसौं, सुरक्षित बनौं भन्छु र चितवन आसपासको महिला दिदिबहिनीहरुलाई कुमुदा बुटिकको डिजाईनहरु फेसबुक पेजमा गएर हेरिदिन र मन परेमा अर्डर गर्न पनि अनुरोध गर्छु, मोफसलमा कान्छी डिजाईनरलाई हौसला दिनुहोला भन्छु, धन्यवाद ।
निषेधाज्ञा एक हप्ता थप्ने निर्णय
निशेधाज्ञाले रोकेन घरेलु हिंशा, एसिड छ्याप्ने श्रीमान पक्राउ
पोखरीमा डुबेर एकैपटक पाँच बालिकाको मृत्यु
आधुनिक दासत्वमा परेका बालकहरुको उद्धार पछि स्वदेश फिर्ती
कोरोनाको माहामारीमा चरिमायाको सक्रियता
हिंसालाई रोकेन निशेधाज्ञाले
एउटा पिडाको आगो ओकल्ने कविता
अमेरिका पुगेर महाबिर पुनको एक महिना
असार १७ गतेदेखि नियमित आन्तरिक उडान शुरु
कोरोनाको नया-नया भेरिअन्ट , थप सतर्कता आवस्यक
उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई सिंहदरबार प्रवेश निषेध?
सूचना विभाग दर्ता नं: १८८३ / ०७६-७७
हरेकखबर मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित
कामनपा वडा न ३१
बानेश्वर , काठमाडौँ , नेपाल
टेलिफोन : ९७७ ०१ ४७८२७२५
बिज्ञापनका लागि : ९८४५१६७१४४
इमेल : info.harekkhabar@gmail.com
चन्द्र प्रसाद हुमागाई
मोहन कुमार घर्ती
© सर्वाधिकार हरेकखबरमा सुरक्षित